Times24 Nepal » गिरिजाबाबु जस्तो वास्तविक रास्ट्रबादि नेता नेपालमा छैन – सुवास नेम्वाङ्
गिरिजाबाबु जस्तो वास्तविक रास्ट्रबादि नेता नेपालमा छैन – सुवास नेम्वाङ्
आज गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृति दिवस । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा कोइरालाको भूमिका निर्णायक महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसै सन्दर्भमा ऋषि धमलाले नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीका क्रममा अब देशमा के परिवर्तन हुन्छ? एमाले र माओवादीबिच पार्टी एकता प्रक्रिया के भइरहेको छ ? लगायतका समसामयिक विषय पनि उठान गरिएको छ ।
स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कसरी चिन्नुहुन्छ ?
गिरिजाप्रसाद कोइराला निरङ्कुशताविरोधी आन्दोलनका शीर्ष नेता हुन् । देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि संघर्ष गरेका, नेपालमा गणतन्त्र स्थापित गर्नका लागि निरन्तर क्रियाशिल नेताका रुपमा म उहाँलाई स्मरण गर्छु । ६२–६३ को आन्दोलनका शीर्ष नेता पनि गिरिजा नै हुन् । कतिपय अवस्थामा उहाँहरुप्रति भ्रम पनि थिए । तर आन्दोलनका बेला उहाँसँग मैले नजिक हुने मौका पाएँ । उहाँ वास्तवमै देशलाई माया गर्ने नेता हुनुहुन्थ्यो । एक शब्दमा भन्छु, यो देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि उहाँको भूमिका निर्णायक थियो । हामी कम्युनिष्टहरुले मात्रै गणतन्त्र स्थापना गर्न सक्दैनथ्यौँ ।
उहाँलाई तपाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
देशले धेरै ठूलो संघर्ष गर्यो । ६२–६३ को आन्दोलन मलाई झलझली आउँछ । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग म सँगसँगै उत्रिने संयोग र सौभाग्य मलाई मिल्यो । अन्तत अहिले हामीले शान्त्रि प्रक्रियालाई झण्डै झण्डै टुङ्गोमा पुर्याएका छौँ । केही मिहिनेतका साथ संविधान निर्माण गरेर कार्यान्वयन पनि भइसक्यो । आन्दोलनपश्चात संविधान सभाको नेतृत्व गर्ने अवसर मैले पाएँ । सफलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छु ।
देश आर्थिक समृद्धिको यात्रामा लैजाने भनिएको छ । राजनीतिक क्रान्ति सकिएकै हो त ?
विगतमा हामीमाथि एउटा आरोप नै थियो, “यिनीहरु आन्दोलन गर्न जान्दछन्, तर आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने ढंग छैन ।” यथार्थमा विगतमा हामी कतिपय कुरामा असफल पनि भएका थियौँ । तर अहिले सफल भएका छौँ । आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गरेका छौँ । जनताका अधिकार संस्थागत बनाउने आन्दोलन सकियो । अब देशलाई समृद्धितर्फ अभियानमा अगाडि बढेका छौँ ।
नेपालमा अब आर्थिक क्रान्ति सुरु हुन सक्ने आधार तयार भएको हो ?
निश्चय पनि, आर्थिक क्रान्तिको आधार तयार भएको छ । त्यो आधारमा उभिएर देशलाई समृद्धिको यात्रामा लैजानुपर्छ ।
मधेशवादी दलले अझै पनि मधेशी जनताको अधिकार सुनिश्चित नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
जहाँसम्म संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने एजेण्डा छ, संविधान संशोधन देशका लागि आवश्यक छ भनेर त संविधानमै लेखिएको छ । संविधान संशोधनका विषयमा संविधान नै लचिलो छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । अब यो देशमा कसैले पनि हतियार उठाउन पर्दैन । हतियार नउठाइकन नै चाहेअनुसारको व्यवस्था स्थापित गर्न सकिन्छ । जनताको मन जित्न सकियो भने संविधान संशोधन गर्न कुनै समस्या छैन । जनताले चाहेअनुसारको संविधान संशोधन हुन सक्छ ।
अहिले पनि संविधानमा सबै जनताको अपनत्व भएको छैन भन्ने गुनासो छ नि ?
अझै पनि यो कोणबाट प्रश्न उठाउनु हुँदैन । पछिल्लो समय त सबै राजनीतिक दल र जनताले संविधानलाई स्विकार गरेका छन् । चुनाव बहिष्कार गर्ने साथीहरु पनि चुनावमा सहभागि हुनुभयो । प्रदेश नम्बर दुईमा त मधेशवादी दलले चुनाव जितेर सरकार नै बनाइसक्नुभयो । अब संविधान नमान्ने को छ ? अझै खुशीको कुरा के छ भने प्रतिनिधीसभाका सदस्यहरुलाई जेष्ठ सदस्यको रुपमा राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले सपथ खुवाउनुभयो । किनभने कुनै बेला उहाँहरुले नै संविधान बहिष्कार गर्नुभएको थियो । अब भन्नुस्, जनताले जनताका लागि बनाएको संविधानप्रति असन्तुष्टी कसमा छ ? सबैले संविधान स्विकार गरे । अब आर्थिक विकासको कुरा गरौँ ।
उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागि नहुने बताइरहनुभएको छ नि ?
त्यो त आ–आफ्नो धारणा हो । संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भन्ने होइन । आवश्यकता र औचित्य भए संशोधन हुन्छ । देश र जनताका लागि यसरी काम गरौँ भनेर कुरा राख्नु भनेको आश्चर्यको कुरा होइन ।
नेपालमा दोस्रोपटक दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार बनेको छ । अब देशमा के परिवर्तन हुन्छ ?
अहिलेको सरकारका लागि अवसर र चुनौति दुवै छ । हामीले चुनावका बेला जनतामाझ गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जनताले विकास चाहेका छन् । त्यो चाहना पूरा गर्न सकिएन भने हिजोको दिनमा सत्तामा बस्दा जनअपेक्षा पूरा नगर्दा ति दलले जे सजायँ पाए भोलीका दिनमा हामीले पनि त्यसरी नै दण्डित हुनुपर्छ । त्यसैले हामीले गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्नुको विकल्प छैन ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबिचको पार्टी एकताको मिति तय भएको हो ?
जतिसक्दो चाँडो पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने सहमति छ । त्यसैअनुसार पार्टी एकताका लागि बनेका कार्यदलले धमाधम काम गरिरहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन तयार हुनासाथ पार्टी एकता गछौँ । विभिन्न नेताहरुले मिति नै तोक्नुभएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।
पछिल्लो समय न्यायापालिका विवादमा छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो लाज लाग्ने विषय हो । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामी सबै मिलेर यस्ता गलत प्रवृत्ति सच्याउनेतिर लाग्नुपर्छ ।